WAR WANAAGSAN: Carab doonaysa inay AC Milan kasii iibsato Yonghong Li? – Gool FM
WAR WANAAGSAN: Carab doonaysa inay AC Milan kasii iibsato Yonghong Li?
Raage December 4, 2017
(London) 12 Dis 2017 – Kooxda Rossoneri ayaa haatan maraysa waayo isboorti oo aan qurux badnayn natiijo ahaan, marka la eego heerka ay ka taagan tahay horyaalka Serie A-da Talyaaniga, taasoo ay kaga sii dartay bareejadii guuldarrada oo kale ahayd ee ay shalay 2-2 kula noqotay Benevento.
Balse xitaa dibedda garoonka laftiisa xaaladdu iskuma toosna. Jimcaha waxay guddi UEFA ka tirsani fariisan doonaan magaalada Nyon si u eegaan heshiiska dhaqaale wanaagga ee ay Milan iskeed UEFA ugu qoor dhiibatey, kaasoo uu go’aankiisu iman doono bartamaha Diseembar, kaasoo ay ka dhur sugayaan maamulka Milan oo uu hor boodayo Marco Fassone.
Khabar wanaagsan, Carab Milan kula soo biiraysa Yonghong Li?
Waxaa soo baxaya warar tibaaxaya in milkiilaha Milan ee Yonghong Li, uu raadinayo jaalal cusub oo kula shirkooba kooxda ballaaran si uu kaash cusub ugu helo maareeynta looxda via Aldo Rossi.
War uu maanta sido wargayska La Repubblica waxaa magaalada London ka soconaya wada xaajood heer sare ah oo u dhexeeya koox ganacsato ah oo Carab ah oo doonaya inay Milan kula shirkoobaan Yonghong Li ama ay gebi ahaanba kala wareegaan kooxda.
Waa sharikad dhismaha ka shaqaysata oo caalami ah oo saldhiggeedu yahay Maraykanka, taasoo doonaysa inay markiiba howsha ka bilowdo dhismaha garoon cusub oo ay kooxdu yeelato, iyadoo uu beryahanba Milano ka soconayay wada xaajood arrinta garoonka ku saabsan oo ka soconayay Milano kaasoo u dhexeeya AC Milan iyo dowladda hoose ee Milano.
Haddaba, la arki doonee inay wararkani isa soo taraan iyo inay iska noqdaan xan suuqeen, balse sida cad inay maalgashadayaal cusub kooxda soo galaan waa ixtimaalka ugu sarreeya ee la sugayo waana mid ay dani ugu jirto kooxda oo haatan maraysa xaalad hubaal la’aan ah.
"Kubadda Cagta Italy dhib badan ayaa ka jira aniga oo qura-na ma bedeli karo", Ancelotti
Sidee Suarez u arkaa go'aankii uu Neymar uga tagay Barca iyo suurtagalnimada uu Real Madrid ugu soo biiri karo?